Isikhokelo soBudlelwane phakathi kweMidlalo kunye noMbutho
Ukufunda ubudlelwane phakathi kwezemidlalo kunye nombutho
Inzululwazi yezemidlalo iphinda ibhekiswe njengentlalo yezemidlalo, isifundo sobudlelwane phakathi kwezemidlalo noluntu. Iphonononga indlela inkcubeko kunye nexabiso elichaphazela ngayo imidlalo, indlela ezemidlalo ezithonya ngayo inkcubeko kunye nemilinganiselo, kunye nolwalamano phakathi kwezemidlalo kunye nabeendaba, ezopolitiko, ezoqoqosho, inkolo, ubuhlanga, ubulili, ulutsha, njl njl. Kukwajongana nobudlelwane phakathi kwezemidlalo nokungalingani kwezentlalo nokuhamba kwezentlalo .
Indawo enkulu yokufunda ngaphakathi kwintlalo yezemidlalo yintlupheko yesini , kubandakanywa ukungalingani ngokwesini kunye nendima ebonakalayo ngokwesini kwimidlalo kuyo yonke imbali. Ngokomzekelo, kwi-1800s, ukuthatha inxaxheba kwabasetyhini kwimidlalo kwakunqandekile okanye kuvinjelwe. Kwaye kwafika ngo-1850 ukuba imfundo yenyama yabasetyhini yaziswa kwiikholeji. Ngee-1930, ibhaskball, umkhondo kunye nensimu, kunye ne-softball zithathwa njengabantu besilisa ngokufanelekileyo kwabasetyhini abafanelekileyo. Ngasekupheleni kwee-1970, abafazi babenqatshelwe ukuba baqhube umqhudelwano kwi-Olimpiki-ukuvinjelwa okungazange kunyuswe kwaze kwaba ngama-1980.
Abagijimi bamabhinqa babenqatshelwe nakwezemidlalo emidlalweni. Xa uRoberta Gibb wathumela ekungeneni kwakhe kwi-1966 iBoston marathon, yabuyiselwa kuye, inqaku elithi abafazi babengenamandla okwenza umgama. Ngoko wafihla emva kwesiqithi kwinqanaba lokuqala waza wabuyela ensimini emva kokuba uhlanga lwaluqhubekile.
Wayebongwa ngamaphephandaba ngokumangalisa kwakhe 3:21:25 ekugqibeleni.
Umgijimeli uKatherine Shrintzer, ophefumlelwe ngamava kaGibb, wayengekho inhlanhla kunyaka olandelayo. Abaqondisi bobuhlanga beBoston kwinqanaba elinye bazama ukumnqanda ngokukhawuleza emncintiswaneni. Wayegqibile, ngo-4:20 kwaye utshintsho oluthile, kodwa umfanekiso we-tussle ungenye yeziganeko ezibalaseleyo zesantya sesini kwizemidlalo.
Nangona kunjalo, ngowe-1972, izinto zaqala ukutshintsha, ngokukodwa ngokucatshulwa kwesiGaba se-IX, umthetho wesigqeba othi:
"Akukho mntu waseUnited States oza kuthiwa, ngaphandle kwesigxina, angabandakanywa ekubeni athathe inxaxheba, aphikiswe inzuzo, okanye abe phantsi kocalulo phantsi kwiprogram yemfundo okanye umsebenzi ofumana uncedo lwemali lukaRhulumente."
Isihloko IX ngokuphumelelayo senza ukuba kwenzeke ukuba abadlali bezemidlalo bafikelele kwizikolo ezifumana inkxaso-mali yezemali ukukhuphisana kwimidlalo okanye kwizemidlalo abazikhethelayo. Kwaye ukhuphiswano kwiikholeji liqhelekile ukuba libe yindlela yokungena kwi-career.
Namhlanje, ukuthatha inxaxheba kwabasetyhini kwimidlalo kuya kumadoda, nangona ukungafani kusekhona. Imidlalo igxininisa indima ekhethekileyo ngokwesini ukusuka ekuqaleni. Ngokomzekelo, izikolo azizinayo iinkqubo zamantombazana ebhola lebhola, ukulwa, kunye nebhokisi. Kwaye bambalwa amadoda abhalisela ukudanisa. Ezinye izifundo zibonise ukuba ukuthatha inxaxheba kwimidlalo ye "masculine" kubangela ukungqubuzana kwezesini zesibalo kubafazi ngelixa iqhaza "kwimidlalo" yezemidlalo lidala ukungqubuzana kwezesini zesini.
Ingxaki ibandakanyeka xa usebenzisana nabadlali abagqithisileyo okanye abathathi hlangothi besini. Icandelo elona lidumileyo liyiCaitlyn Jenner, ngubani oxoxwa naye nge-"Vanity Fair" phephancwadi malunga nokuguquka kwakhe, wabelana ngayo nangona xa ephumelele uzuko lwe-Olimpiki njengoBruce Jenner, waziva edidekile malunga nobulili kunye nenxalenye eyadlala kwimpumelelo yakhe yezemidlalo.
IiMithombo eziMali eziThengisiweyo
Abo bafunda i-sociology yezemidlalo nabo bagcina iithebhu kwiindidi ezahlukeneyo zendaba kwiindaba ezibonisa ukunyaniseka. Ngokomzekelo, ububukeli bemidlalo ethile ngokuqinisekileyo buhluka ngohlobo lwesini. Amadoda ngokuqhelekileyo abheka ibhola yebholabhasi, ibhola lebhola, iHockey, i-baseball, ukulwa kunye nebhokisi. Abesifazana ngandlela-thile banamathele ekuhlaleni i-gymnastics, i-skating skating, i-skiing, ne-diving. Iimidlalo zamadoda nazo zixutyushwa kaninzi kunezemidlalo yabasetyhini, kokushicilelwa kunye nakubonwakude.
IiNkalo eziPhambili zeeNkcubeko kunye noPapasho
Impahla Yokomoya kunye neMpiliso yeAlabaster
Imbali yeBhola yeBhodi kunye nezinto ezenziweyo